नामसँग केको हाँसो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
साङ्मो योन्जन तामाङ
नामसँग केको हाँसो !
फाल्गुन ३०, २०७५ साङ्मो योन्जन तामाङ
काठमाडौँ — केही समयअघि कुनै औपचारिक कामको सन्दर्भमा मलाई नाम सोधियो र बताएँ । मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै प्रश्नकर्ताको अनुहार बिग्रियो । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘के नाम हो यस्तो ? कस्तो नाम राखिदिएको नि ?’ उनमा आश्चर्यभन्दा पनि आपत्ति झल्किन्थ्यो । मलाई यस्तो प्रतिक्रियामा कुनै अनौठो लाग्दैन ।
‘कस्तो अप्ठ्यारो नाम ? नेपालीमा राखेको भए भइहल्थ्यो नि !’ यस्ता भनाइसँग म अभ्यस्त भइसकेकी छु । यसले मलाई दुःखी बनाउँदैन, बरु आनन्दित हुन्छु । आजसम्म कुनै गैरमातृभाषी (प्रभुत्वशाली) ले यस्तो नामको प्रशंसा गरेको मलाई याद छैन, न त मातृभाषी समुदायकाले नै मोह देखाएको थाहा छ । केहीले मात्र यसको अर्थ र पृष्ठभूमि जान्न चाहेका हुन्छन् ।
अरूलाई जेजस्तो लागे पनि तामाङ मातृभाषामा राखिएको आफ्नो नाम ‘साङ्मो’ मलाई भने प्यारो लाग्छ । यसमा फरकपना त छँदै छ, शुद्धता, पवित्रता र नारित्वको अर्थ बोकेको यो नाम नेपालको मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएकाले सुन्दर पनि छ, अर्थपूर्ण पनि छ । यसले मलाई आफ्नो जरा, परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिराखेको छ । विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहँदा पनि आफ्नो समुदाय र नेपालीपन मैले वास्तवमै महसुस गर्न पाएकी छु ।
मौलिक नाम र 'नेम सेमिङ’
आधुनिकीकरण तथा पाश्चात्य संस्कृतिको व्यापक अनुसरण गरिरहेको नेपाली समाजमा मौलिक नाम बिस्तारै विस्थापित भइरहेका छन् । झन् संस्कृतीकरणको चपेटामा परेका आदिवासी समुदायमा त मातृभाषामा बालबालिकाको नाम राख्ने परम्परा नै हराऊँदै गएको छ । नामले व्यक्तिको व्यत्तित्व, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक तथा उच्च आर्थिक अवस्था झल्काउने सोचमा आजभोलि आधुनिक तथा आयातित नाम राख्ने गरेको पाइन्छ ।
नाम राख्नु आ–आफ्नो विचार र अधिकार हो । तर कुनै व्यक्तिविशेषलाई नामकै आधारमा दिइने नकारात्मक प्रतिक्रिया भने कदापि सह्य र स्वीकार्य हुँदैन, विशेष गरी त्यस्ता नाम जुन भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका हुन्छन् । यस्तो ‘नेम सेमिङ’ गर्ने (नामलाई गिज्याउने) व्यक्ति नेपालको सांस्कृतिक र भाषिक सहिष्णुताप्रति कति लापरबाह छ भन्ने प्रस्टिन्छ ।
भाषा र संस्कृतिले धनी भनी विश्वसामु चिनाइने नेपालको विविधतामाथि नै कसरी प्रहार गरिएको छ भनी यसबाट बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो देश र देशका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक समुदायप्रति सेवाप्रदायकहरूमा रत्ती ज्ञान नभएको वा तिनले असहिष्णुताको भारी बोकिरहेको रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ ।
नेपालका आदिवासी समुदायमा आफ्नो मातृभाषामा नाम राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अधिकांश आदिवासी समुदाय भोट–बर्मेली भाषा परिवारका छन् । भारोपेली भाषा प्रयोग गर्ने खस–आर्य (इन्डो–आर्यन) समुदाय नेपालमा वर्चस्वशाली हुनाले अन्य मातृभाषामा राखिएका नाम उच्चारण गर्न उनीहरूलाई बानी नपरेको हुन सक्छ ।
यस्ता नामलाई अरू गैरमातृभाषी समुदायले सहजै स्वीकार नगर्दा ‘बुलिङ’ को (कमजोरलाई सताउने) अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट जोगिन कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको नाम नेपाली र संस्कृतमा राख्ने गरेका निकै उदाहरण छन् । मूलधारका भन्दा फरक नामका कारण जब आफ्नै साथीहरूबाट आदिवासी बालबालिका गिज्याइन्छन्, तब यसले बालमस्तिष्कमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । यो तथ्यलाई मनोवैज्ञानिकहरूले पनि औंल्याउने गरेका छन् ।
अझ कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरू बालबालिकाको नामका पछाडिको हिज्जे थप्नदेखि नामै परिवर्तन गरिदिनसम्म उत्साहित हुने गर्छन् । बालबालिकाका नाम उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा नामै बिगारेर उल्टो अर्थ लाग्ने गरी बोलाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रो समाजका प्रभुत्वशाली वर्गले विविधतालाई कसरी स्वीकार वा अवलम्बन गरिरहेका रहेछन्, यसबाट खुल्छ । कसैको नामलाई हाँसोमा उडाउनु भनेको मुलुकको विविधतालाई नै गिज्याउनुहो ।
एउटा उदाहरण हेरौं । युकेजी पढ्ने एक बालकले एउटा समारोहमा अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो नाम बताउने क्रममा अर्कै नाम भने । सँगै रहेका अभिभावकले उनलाई आफ्नो नाम राम्रोसँग भन्न लगाए । फेरि पनि उनले ‘नरेन’ नै भने । पछि उनकी आमाले छोराको नाम ‘न्होर्साङ’ हो भनिन् । साँचो नाम किन नभनेको भनी सोध्दा बालकको जवाफ थियो, ‘यो नाम मिसले राख्नुभा’ हो ।’ उनका सहपाठी र ठूलो कक्षाका ‘दाइ’ हरूले उनको नाम तोडमोड गरी हाँसोको रूपमा लिने गरेका रहेछन् र शिक्षिकाले पनि बोलाउन सजिलोका लागि ‘नरेन’ भन्न थालेकी रहिछन् ।
पश्चिमा समाजमा ‘नेम सेमिङ’ लाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई ‘रेसिस्ट’ (नश्लवादी) भन्ने गरिन्छ र यसको प्रतिकारमा उचित कदम चाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । प्रायः अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरू गोरा जातिबाट यसको सिकार बन्ने गरेका छन् । गोराका जस्तै सुनिने नाम नहुँदा उनीहरू विभेदमा पर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
केही समयअघि अमेरिकाको एउटा विमानस्थलमा यात्रुलाई उनको नामलाई लिएर खिल्ली उडाइएका कारण विमान कम्पनीले माफी मागेको समाचार बाहिर आएको थियो । याक्राका त्रममा आमासँग रहेका पाँच वर्षीया बालिकाको नामलाई साउथ–वेस्ट एयरलाइन्सका कर्मचारीले हाँसो गरेको र पछि उनको नाम उल्लिखित उक्त बोर्डिङ पासको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा समेत पोस्ट गरेका कारण उक्त विमान कम्पनी ती यात्रुसँग सार्वजनिक रूपमै माफी माग्न बाध्य भएको थियो । कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीको व्यवहार शिष्ट नरहेको स्विकारेको थियो ।
‘नेम सेमिङ’ ले अरूको आत्मसम्मानमा कति ठेस पुग्छ भन्ने यस्ता कैयौं घटनाले पुष्टि गर्छन् । ‘ओल्ड फ्यासन्ड,’ ‘वेइर्ड,’ ‘ट्रेडिसनल,’ ‘एथ्निक,’ ‘आउटडेटेड,’ ‘फन्नी’जस्ता प्रतिक्रिया सुन्नुपर्ने डरले नै कतिपय अभिभावकले विद्यालयमा भर्ना हुने बेला आफ्ना बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरेका हुन्छन् । केहीले युवावस्थामा प्रवेश गरेसँगै आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने वा त्यो सम्भावना नभए उपनाम राख्ने गर्छन् ।
आफ्नो मातृभाषामा नाम राख्ने र यसलाई कायम राख्ने अधिकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३९(१) मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरणको हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी आदिवासी आधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), २००७ को धारा १३(१) मा पनि आदिवासी जनजातिहरूसँग उनीहरूको समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार छ भनी प्रस्टै लेखिएको छ ।
बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले ‘पक्षराष्ट्रहरूले कानुनले मान्यता दिए अनुसार बालबालिकाले आफ्नो राष्ट्रियता, नाम र पारिवारिक सम्बन्ध लगायत आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने आधिकारलाई गैरकानुनी हस्तक्षेपबिना सम्मान गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय यी सन्धि र महासन्धि देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् र देशको कानुनसरह लागू हुन्छन् ।
यसरी कानुनतः व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा भाषा र संस्कृति लोप हुनबाट बचाउन र यसको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आ–
आफ्ना मातृभाषामा नाम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट मौलिक संस्कृति र पहिचानको संरक्षण हुने भाषावैज्ञानिकहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिवर्तन र सांस्कृतिक चेतनासँगै आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति झुकाव राख्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । संस्कृति र परम्पराको महत्त्व बुझेकाहरूले मातृभाषामा आफ्ना बालबालिकाको नाम राख्न सुरु गरेका छन् ।
मातृभाषामा नाम राख्ने प्रयासको कदर गर्नु समयोचित हुन्छ, न कि हाँसोमा उडाएर निरुत्साहित बनाउनु । यसो भएमा बालबालिकालाई पछि गएर आफ्नो नाम, आफ्नो माटो वा पहिचानसँग कहीँकतै सम्बन्ध भएकामा ग्लानि हुँदैन, बरु गौरव नै हुन्छ । नाम बोझिलो वा अरू कसैको पहिचान वा अस्तित्व बोक्ने हुनु हुँदैन, जसले गर्दा उसलाई सदैव आफ्नो नाम राखिदिनेप्रति गुनासो भइरहोस् । नाम आफ्नै देश, भूमि, माटो र संस्कृतिबोध गराउने खालको हुनुपर्छ ।
व्यक्तिविशेषको नाम उसलाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्वसँग जोड्ने ठूलो आधार हो । यसले संस्कृति, इतिहास र पुर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ । कोही–कोहीलाई त नाम विश्वकै एक मात्र मन पर्ने र महत्त्वपूर्ण शब्द लाग्दो हो । तसर्थ आफ्नो पहिचान झल्किने अर्थपूर्ण नामलाई सबैले सहजै लिनुपर्ने हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा यस्ता नामलाई स्वीकार्न अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । नकारात्मक मानसिकतालाई परिवर्तन गरी विविधतालाई सम्मान गरे मात्र जोसुकैले नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्छन् । समावेशीको सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले नै अंगीकार गरिसकेकाले यसको अवलम्बनका लागि पहिलो र सानो कदमको रूपमा सबै नामप्रति सम्मान जनाउने पो हो कि ?
लेखिकाले हालै आइसर कलेजबाट एमफिल गरेकी छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३४
फाल्गुन ३०, २०७५ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौँ — संसारमा करिब ८५ करोड मानिस विभिन्न किसिमका मृगौला रोगबाट फीडित छन् । वर्षेनि २४ लाख व्यक्ति दीर्घकालीन मृगौला रोगबाट आत्रान्त हुने गर्छन् । यो रोग मानव मृत्युको छैटौं प्रमुख कारकमा फर्छ । १ करोड ३० लाख व्यक्ति तत्काल लाग्ने मृगौला रोगको सिकार छन् । तत्काल लाग्ने मृगौला रोगबाट आत्रान्त व्यक्तिहरूमध्ये ८५ प्रतिशतजति निम्न र मध्यम आय भएको वर्गका छन् ।
वर्षेनि करिब १७ लाख व्यक्तिले यो रोगबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । दीर्घकालीन र तत्काल लाग्ने मृगौला रोगले मुटुको रोग, मधुमेह र उच्च रक्तचाप, मोटोपन, एचआईभी, मलेरिया, क्षयरोग र कलेजो रोग लागेका व्यक्तिमा थप हानि पुर्‍याउने गर्छ । यो बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा लगायत सबैमा अस्वस्थता र मृत्युको कारक बन्ने गरेको छ ।
यी तथ्यका बावजुद मृगौला रोगको उपचारमा संसारभरि असमानता र विभेदका थुप्रै उदाहरण छन् । दीर्घकालीन मृगौला रोग र तत्काल लाग्ने मृगौला रोगहरू व्यक्तिविशेषको सामाजिक परिवेश, जन्म र बाल्यकाल र तत्पश्चातको अवस्था, व्यवसाय, उमेर र आर्थिक अवस्था, लिंग, विभेद, अज्ञानता, व्यावसायिक जोखिम तथा प्रदूषण आदिबाट प्रायः प्रभावित हुने गर्छन् ।
प्रत्यारोपण दीर्घकालीन मृगौला रोगको सर्वोत्तम उपचार हो । उच्चस्तरीय जनशक्ति, पूर्वाधार, अंगदाता तथा डाइलाइसिसको भरपर्दो व्यवस्था नभई यो सम्भव छैन । भौतिक तथा कानुनी जटिलता र अंगदान सम्बन्धी अन्धविश्वासले अनावश्यक रूपमा प्रत्यारोपणमा भन्दा डाइलाइसिसमा धेरै व्यक्ति आश्रित हुने गर्छन् ।
नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति र रणनीति नबनाइएका होइनन्, तर मृगौला रोगकै रोकथाम तथा उपचारमा त्यही अनुपातमा गम्भीरता लिइएको पाइँदैन । संसारका ५३ प्रतिशत देशहरूको अवस्था यस्तै छ ।
'मृगौला स्वास्थ्य : जहाँसुकै, जोसुकैका लागि’
विश्वभर तीव्रताका साथ बढिरहेको मृगौला रोगको भार व्यवस्थित गराउने रणनीति निर्माणमा सबैलाई सचेत गराउने उद्देश्यका साथ यस वर्षको विश्व मृगौला दिवस मनाइँदै छ । यस पालिको नारा ‘मृगौला स्वास्थ्य : जहाँसुकै, जोसुकैका लागि’ ले मृगौला रोगको उपचार र रोगथामका निम्ति सक्रिय हुन झकझकाउने अपेक्षा छ ।
सबैका लागि स्वास्थ्य नीतिको लक्ष्य जनस्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचभित्र स्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिगो रूपमा उपलब्ध गराउनु रहेको छ । विश्व मृगौला दिवसले प्रत्येक देशलाई आफ्ना नागरिकको मृगौला हेरविचारमा उचित व्यवस्था गर्न–गराउन आह्वान गरेको छ ।
मृगौला रोग लागेर उपचारमा जानुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । हामीले यो अंगलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित जीवनशैली अनुसरण गर्नुपर्छ । स्वस्थ खानेपानी, शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित आहार, धूमपान र मद्यपान त्याग मृगौलालाई बचाउने राम्रा उपाय हुन् । नियमित रूपमा पिसाब, रगत, शरीरमा बोसोको मात्राको परीक्षण गर्नुपर्छ । उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा रोगको प्रारम्भिक अवस्थामै निदान र उपचार हुन सके बढी प्रभावकारी मात्र नभई निको पनि हुन सक्छ ।
हाम्रो मुलुकमा करिब ६२ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुने गर्छ । मुटु, क्यान्सर, चोटपटक, मृगौला, कलेजो रोग मृत्युका प्रमुख कारक हुन् । प्रत्येक वर्ष करिब ३ हजार नेपालीको मृगौला फेल हुने गर्छ । हाल करिब ४,५०० जनाले डाइलाइसिस सेवा लिइरहेको तथ्यांक छ । हालसम्म करिब १,३०० जनाको मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
नेपालमा डाइलाइसिस र मृगौला प्रत्यारोपणलाई पूर्णतः निःशुल्क गरिएको छ, जुन सुविधा अरू विकासोन्मुख मुलुकमा विरलै पाइन्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक २ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकम प्रत्यारोपण तथा डाइलाइसिसमा खर्चहुने गर्छ ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले स्थापनाको छ वर्षको अवधिमा ५८६ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ, दैनिक १२० जनालाई हेमोडाइलाइसिस सेवा दिँदै आएको छ । यस वर्ष २०० जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो १० महिनामा १६१ जनाले यो सेवा पाइसकेका छन् । यसै वर्ष मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट २ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण र १ जनाको कलेजो प्रत्यारोपणसमेत भएको छ । प्रत्यारोपण सेवाबाट मात्रै मुलुकको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचेको अनुमान छ ।
नेपालको अंगदान र प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानुन विश्वकै उदार र फराकिलोमध्येको एक हो । स्वस्थ व्यक्तिको अंगदानबाट जुनसुकै नातेदारले लाभ लिन सक्छन् । एकै परिवारभित्र अंगदाता र ग्रहणकर्ताबीच मेल नखाएमा दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारबीच साटासाट गरेर पनि प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढ्दो सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनि २,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने गर्छ र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वर्षेनि १००० जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गर्छ । आफ्नो मृत्युपछि जलेर खरानी हुने वा गाडेर सकिने अंग अरुको जीवन बचाउनलाई दिन सके मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिबाट ८ जनाले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । संसारमा योभन्दा पुण्य काम अरु के नै हुनसक्छ र !
लेखक सहिद धर्मभक्त राष्ट्रियप्रत्यारोपण केन्द्रका कलेजो तथामृगौला प्रत्यारोपणविद् हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३१